Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Seychelles waxay kujirtaa Palazzo Versace Dubai E-hadiyad Platform
Iyadoo lala kaashanayo Palazzo Versace Dubai, Guddiga Dalxiiska Seychelles wuxuu dhigaa meesha loo socdo hoosta tooska raaxada iyadoo loo marayo hudheelka hudheelka ah ee E-Gift Platform.
Caadiga cusub ee adduunkeena kala fog, hadiyadaha dhijitaalka ah ayaa si isdaba joog ah kor ugu kacaya.
The Palazzo Versace Dubai e-hadiyad ah waxay bixisaa hadiyado heer sare ah oo ka yimaada joogitaanno qaali ah, si loogu daaweeyo spa, hadiyado cunno, iyo inbadan.
Kuwani heshiis-jebinta iyo dalabyada xagaaga ee gaarka ah ayaa la heli karaa oo keliya wakhti xaddidan.
Palazzo Versace Dubai E-hadiyaddiisu waxay bixisaa khibrado gaar ah oo laga helo joogitaannada raaxada iyo daweynta xasilloonida ee isxigxiga, hadiyado gaar ah oo abuura xusuus nololeed.
Kordhinta baahida loo qabo hadiyadaha dhijitaalka ah ee kor u kacaya iyada oo adduunku la jaan qaadayo 'cusub ee caadiga ah', ayaa STB ay la jaanqaadeysaa waajibaadkeeda xaqiijinta muuqaalka jasiiradaha, iyadoo siineysa dadka soo booqan kara fursad ay ku helaan khibradaha jasiirad ee gaarka ah ee janno kulaylaha ay bixiso.
Kuwaas oo ka mid ah dalabyadan qaaliga ah, hadiyado-bixiyeyaashu waxay soo iibsan karaan waayo-aragnimo u qalma ugu yaraan AED 4,000 si ay ugu istaagaan fursad ay ku guuleystaan ​​hal-hal-nooc, seddex habeen ah oo la joogo goob dalxiis oo ku taal Seychelles.